Bitcoin waa sida | Exonumia
# Bitcoin waa sida
Waxaa qoray Oleg Andreev 2017/12/10open in new window
Bitcoin waa sida lacag caddaan ah: dib looma celin karo oo adiga ayaa mas'uul ka ah maaraynta. Haddii aad lumiso boorsadaada, waxaad lumisay lacagtaada. Waxaad siin kartaa bitcoins qof si uu kuugu hayo, laakiin waxay la mid noqon doontaa bangi kasta: waa inaad ku kalsoon tahay in aanay ku baxsan doonin lacagtaada.
Bitcoin waxay ka duwan tahay lacagta caddaanka ah: waxaad kaydin kartaa inta aad rabto mana qaadan doonto meel bannaan. Waxaad u diri kartaa siligga qof kasta. Suurtagal maaha in been abuur la sameeyo. Kuma siin kartid hal ilbiriqsi: si aad dhab ahaantii u dammaanad qaaddo in macaamilku dhacay, waa inaad sugtaa 10-15 daqiiqo caddaynta sirta ah si ay u soo saarto shabakadu.
Bitcoin waa sida dahabka oo kale: lama soo saari karo doonisteeda, waxaa jira xaddi xadidan oo lacagtani waxay ku kala firirsan tahay xilli-saxeedka joogtada ah (inta badan waqtiga). Si aad u hesho bitcoins qaar waa in qof ku siiyaa, ama waa in aad mineed iyaga. Sida dahabka, Bitcoin waa dhalaal: waxay dadka ku soo jiidataa injineerkeeda quruxda badan, luqadda barnaamijka qandaraaska ee ku dhex dhisan, dhiirigelinta xigmadda leh, iyo ballanqaadka xorriyadda ee xorriyadda qasabka.
Bitcoin kama duwana dahabka: Waxaad haysataa dammaanad ah inaan qofna si lama filaan ah u heli doonin buur dahab ah ama macdanta asteroids. Si ka duwan sida dahabka, Bitcoin dhibka waxaa lagu hagaajiyaa dadaalka macdanta si loo ilaaliyo jadwalka. Waxaa laga yaabaa inaad dahabka oo dhan ku qodo hal maalin gudaheed, laakiin weligeed suurtagal ma noqon doonto Bitcoin si kasta oo kombuyuutarku u ahaado mid degdeg ah. Dadaallada macdan qodista ee kobcaya waxay kaliya u leexin karaan jadwalka (shabakadu waxay hagaajinaysaa dhibka soo saarista 6 baloog saacaddii, laakiin haddii shabakadu si joogto ah u korto waxay soo saari kartaa 7-8 baloog saacaddii).
Bitcoin waa sida bangi oo kale: waxaa jira kombiyuutaro, xog ururin iyo wax kala iibsiga. Databases-ku waxay kaydiyaan dhammaan taariikhda dhammaan lacagaha soo gala iyo kuwa baxaya: yaa u soo diraya inta loo dirayo. Wax walba waa digital. Ma jiraan wax khasnado ah oo leh dahab ama sanduuqyo deebaaji oo gaar ah, kaliya xisaabinta hal "ledger".
Bitcoin way ka duwan tahay bangiga: qof kastaa wuu xaqiijin karaa in xog-ururintooda ay ka kooban tahay xog ledger la mid ah tan dadka kale. Ma jiro maamule mas'uul ka ah cusboonaysiinta buug-gacmeedka iyo hubinta in aan la fara-gelin. Qof kastaa wuxuu yeelan karaa xisaabaadyo badan inta uu rabo dhammaan xisaabaadkana waa qarsoodi (haddii uusan qofku muujin aqoonsigiisa mooyaane). Ledger ma kaydiyo magacyada, kaliya baaqyada iyo lambarada akoontiga. Ma jirto wax suurtagal ah oo ah "keydka jajabka" marka bangigu amaahiyo lacag ka badan inta uu dhab ahaantii haysto. Dhab ahaantii, ma jiraan wax deyn ah oo ku saabsan buug-gacmeedka bitcoin: ama waxaad lacag ku haysaa cinwaankaaga oo si buuxda adigaa iska leh, ama aadan samayn oo ma isticmaali kartid gabi ahaanba. Sidoo kale, Bitcoin waxay u ogolaataa inay lacag ku xidho "qandaraasyo": xujooyinka qarsoodiga ah ee loogu talagalay in lagu faafiyo go'aan gaarista oo u dhexeeya dhowr qof ama waqti.
Bitcoin waa sida Monopoly money: qadaadiicda waa calaamado aan la taaban karin oo aan sheegan wax qiimo ah. Dadku way qiimeeyaan sababtoo ah waxay doorteen inay ciyaaraan ciyaarta. Dhab ahaantii, isku mid ayaa la mid ah dahabka ama lacag kasta oo kale.
Bitcoin way ka duwan tahay Monopoly money: waxaa jira sahayda calaamado xaddidan oo qofna ma been abuuran karo. Tani waxay ka dhigaysaa musharax wanaagsan oo la ururiyo oo caalami ah oo la aqoonsan yahay sida qadaadiicda dahabka ama qalinka.
Bitcoin waa sida Git: gudaha Git (nidaamka xakamaynta nooca qaybsan) dhammaan isbeddelladaada waxaa lagu habeeyey silsilad ay ilaalinayaan xashiishad qarsoodi ah. Haddii aad ku kalsoon tahay xashiishkii ugu dambeeyay, waxaad ka heli kartaa dhammaan macluumaadka hore (ama qayb ka mid ah) meel kasta oo aad weli xaqiijiso inay tahay waxa aad filayso. Sidoo kale, Bitcoin, dhammaan wax kala iibsiga waxa lagu habeeyaa silsilad (* blockchain*) oo marka la ansixiyo, meel kasta oo lagu kaydiyo, waxaad had iyo jeer aamini kartaa qayb kasta oo blockchain ah adiga oo hubinaya silsiladaha xashiishyada ee ku xidha xashiish aad hore u jirtay. kalsooni. Tani waxay si dabiici ah awood u siinaysaa kaydinta la qaybiyey iyo hubinta daacadnimada oo sahlan.
Bitcoin waxay ka duwan tahay Git: qaab uu qof walba ugu dadaalo inuu ka shaqeeyo hal laan. Git gudaheeda qof kastaa wuxuu yeelan karaa laamo badan iyo fargeeto wuxuuna isku daraa maalinta oo dhan. Seeraar midna kama "ku dari karo" fargeeto. blockchain waa geed ka mid ah taariikhda macaamil ganacsi, laakiin had iyo jeer waxaa jira hal laan oo weyn (taas oo leh qiimaha) iyo qaar ka mid ah laamo yaryar oo shil ah (aan ka badnayn hal-labo baloog oo dheer) oo aan qiimo lahayn. Mawduuca Git wuxuu ka muhiimsan yahay laamaha, isku-dhafka Bitcoin waa arrimo ka badan nuxurka.
Bitcoin waa sida Bittorrent: Shabakadda si buuxda ayaa loo baahiyey, ma jiro "reexaanta" ama "bangi". Blockchain-ku waa sida hal fayl oo ku jira bittorrent: si qarsoodi ah loo xaqiijiyay oo loo wadaago kombiyuutaro badan. Ka qaybgale kasta, oo ay ku jiraan macdan qodayaasha waxay u dhaqmayaan si siman. Haddii qayb ka mid ah shabakadu ay xumaato, wax kala iibsigu wuxuu dhex maraa qaybo kale. Xitaa haddii shabakada oo dhami hoos u dhacdo, macluumaadka ku saabsan macaamilka ayaa weli lagu kaydiyaa kumanaan kombiyuutaro madax-bannaan oo qofna lacagtiisa ma lumo. Marka dadku isku xirmaan midba midka kale mar kale, waxay sii wadi karaan dirista macaamilada sidii wax aan dhicin. Bitcoin iyo Bittorrent labaduba way ka badbaadi karaan dagaalka nukliyeerka sababtoo ah macluumaadka ma noqdaan shucaac oo si badbaado leh ayaa loo koobi karaa.
Bitcoin way ka duwan tahay Bittorrent: halkii ay ka ahaan lahayd "faylal" badan oo madax banaan, waxaa jira hal fayl oo had iyo jeer koraya: blockchain. Sidoo kale, ka qaybgalayaasha ugu muhiimsan: macdan qodayaasha ayaa dhab ahaantii lagu abaalmariyay shaqadooda lacag dhab ah.
Bitcoin waa sida xoriyatul qawlka: wax kala iibsi kastaa waa fariin guud oo gaaban oo lagu dhawaaqi karo iyada oo aan loo eegin meesha iyo habka. Haddii qaar ka mid ah macdan qodayaasha ay maqlaan, waxay ku dari doonaan blockchain iyo fariintaasi waxay ahaan doontaa weligeed taariikhda. Qof kastaa wuu arki doonaa, qofna ma tirtiri karo.
Bitcoin waxay ka duwan tahay xorriyadda hadalka: in wax la sheego waxay la timaadaa kharash. Wax kala iibsiga waxa uu dhaqaajiyaa qadaadiicda ay tahay in aad ku bilowdo. Markaa mooryaan kasta looma ogola inuu qeyliyo, laakiin kaliya kuwa mudnaanta lahaa si ay u helaan xoogaa qadaadiic ah meesha ugu horeysa. Sidoo kale, macdan qodayaasha ayaa laga yaabaa inay diidaan wax kala iibsiga haddii ay tahay spammy ama aysan ku jirin kharashyo ku filan. Markaa ninna qofna ma siiya xorriyadda sida " biirka", laakiin qof kastaa wuxuu isku dayaa inuu iskaashi ku sameeyo si ikhtiyaari ah.
Bitcoin waa sida heshiis bulsho: waa dhacdo dhaqameed saafi ah. Waxay u shaqaysaa sidii lacag oo kale ilaa inta ay dadku sidaas ula dhaqmaan oo ay u leeyihiin in ay qabtaan oo ay ixtiraamaan xeerarkeeda. Tiknoolajiyada ayaa loo baahan yahay oo kaliya si loo bixiyo tubooyinka lagama maarmaanka u ah qandaraaskaas.
Bitcoin waxay ka duwan tahay heshiis bulsheed: maaha nooca qandaraas ee ay dugsiyada wax ku dhigaan. Ma dabacsana, mana soo rogaan madaxda qaar. Waa xeerar aan la beddeli karin oo qof kastaa doorto inuu naftiisa ku dhaqo, sidaas darteedna ku daraysa heshiis la isku raacsan yahay.
Bitcoin waa sida lacagta internet-ka sixirka: waa si fudud.
← U sharax Bitcoin sida aniga oo shan jir ah Bitcoin Waa Sida Ciyaaraha →